बिबाहमा छोरा मन्डपबाटै भा’गेपछी हुनेवाली बुहारी संग ससुराको बिबाह ! - Onlines Time
November 10, 2020 onlinestimeLeaveaComment on बिबाहमा छोरा मन्डपबाटै भा’गेपछी हुनेवाली बुहारी संग ससुराको बिबाह !
भारतको बिहारमा एउटा अच’म्म लाग्दो बिबाहको घ’टना भएको छ।बिहार स्थित ६५ बर्सिय रोसन लालको बिबाब २१ बर्सिय कन्या संग हुन उनका छोराले नै बाध्य पारेका छन्।बासतबमा कुरा के रहिछ भने,रोसन लालको छोराको बिबाह सपना नामकी कन्या संग हुनेवाला थियो। बिबाहको दिनमा जन्ती कन्याको घरको ढोकामै पुगेको थियो तर रोसनको छोरा मन्डपबाट एकाएक भा’गे।
श्रीमान अफिस गएको बेला श्रीमतीले घरमै परपुरुषसँग म’स्ती गर्दा…..
जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ, नपढे तपाईलाई प’छुतो हुनेछ ! मेरी श्रीमतिले…
आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन् :छोरा तिमी फर्कने बाटो अफ्ठेरो छ, नलडी जानु है ! (नपढे पछुताे लाग्ने छ )
June 6, 2021 June 7, 2021 onlinestime
संसारलाइ पछी पार्दै विश्वमै राम्रो अक्षर लेख्ने नेपाली प्रकृति – कम्प्युटरलाई च्यालेन्ज पत्रकार चकि*त , भिडियो हेर्नुहोस (सम्मान स्वरुप सेयर गराै)